D 147 ntụ ntụ (1146963-51-0) | neuroprotective na neurotrophic onyinye
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / J 147 ntụ ntụ
Rating: SKU: 1146963-51-0. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke X XUMUM-147 (1146963-51-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
J147 ntụ ntụ bu nke mbụ mepụtara na 2011, ndị nchọpụta emewokwa ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na ọ nwere ike iweghasị mberede nchekwa ma jiri nwayọọ ma ọ bụ belata Alzheimer na ụmụ oke. Ma ruo mgbe ọmụmụ a, ha amaghị otú o si arụ ọrụ n'ime mkpụrụ ndụ. Ha gosipụtara na J147 ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịmepụta ATP, protein na mitochondria na isi iyi nke ike nke ahụ. Mgbe J147 ntụ ntụ dị, a na-egbochi ihe ndị na-egbochi ịka nká. Nyocha ndị ọzọ gosipụtara na J147 ntụ ntụ na-abawanye ọkwa nke ATP ma na-akwalite ahụike, ihe mgbochondria
J 147 ntụ ntụ video
Raw J 147 uzuzu isi ihe
aha: J 147 ntụ ntụ
Usoro Molecular: C18H17F3N2O2
Molekụla arọ: 350.3349896
Nchekwa Nche: 4 ° C
Raw J 147 ntụ ntụ na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ na mgbakwunye agbam ume
J 147 (1146963-51-0) Nji usoro
N'iji usoro nyocha ọgwụ maka ọrịa Alzheimer (AD) nke dabere n'ọtụtụ ọrịa nke ịka nká, anyị mere nchọpụta nke nwere ikike dị na ncheta oke na ụdị anụmanụ AD. Ebe ọ bụ na onyinye a, J-147 ntụ ntụ, bụ phenyl hydrazide, enwere nchegbu na enwere ike ịgbakwunye ya na amines / hydrazines aromatic nwere ike ịbụ carcinogenic. Iji chọpụta nke a, anyị nyochara metabolites nke J 147 ntụ ntụ na mmadụ na òké microsomes na òké plasma. Egosiri na ntụ ntụ J-147 (1146963-51-0) anaghị etinye aka na amines aromatic ma ọ bụ hydrazines, na scaffold ahụ siri ike nke ọma, yana ndị metabolites metabolites bụkwa neuroprotective. O kwubiri na isi metabolites nke J 147 (1146963-51-0) ntụ nwere ike inye aka na ya ihe omumu n'ime anụmanụ.
J 147, nke ewepụtara na curcumin curry, nwere obere nsị na n'ezie na-agbanwe mmebi na akwara ozi metụtara Alzheimer.
J 147 (1146963-51-0) bụ protein mitochondrial nke a maara dị ka ATP synthase, kpọmkwem ATP5A, nke bụ akụkụ nke protein ahụ. ATP synthase na-etinye aka na mitochondrial nke ATP, nke mkpụrụ ndụ na-eji maka ike.
Ndị nnyocha ahụ gosipụtara na site na mbenata ọrụ nke ATP synthase, ha nwere ike ichebe sel ndị na-adịghị na-ahụ maka ọtụtụ ọrịa ndị metụtara ụka nke ụbụrụ. Enwere otu ihe kpatara nke a na-egosi na ọ bụ ọrụ nke excitotoxicity na mmebi mmebi nke neuronal.
Ihe na-eme ka a ghara ịmalite ime ihe na-adịghị mma bụ nke na-eme ka ọkpụkpụ na-egbu egbu ma gbuo ya site na ịkpaghasị nke ndị nabatara maka nchịkọta neurotransmitter glutamate. Chee na ọ dị ka ngbanwe ọkụ ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ ngwa ngwa na ọ ga - eme ka ọkụ bọlbụ ahụ na - ada.
N'oge na-adịbeghị anya, e gosipụtara ọrụ nke ATP synthase mgbochi maka neuroprotection megide mmebi ihe na-akpata na-egosi na a na-eme nchọpụta . Nnyocha nke abụọ gosiri na ụdị ejiji ndị na-egosipụta ụdị mmadụ dị iche iche bụ ihe na-emechi ihe na-akpata 1 (hIF1), nke na-eme ka mgbochi nke ATP synthase, dịkwuo ike na ọnwu na-anwụ anwụ ma ọ bụrụ na mmebi ahụ na-emebi. Ihe omuma a kwekoriri ihe omumu a nke X XUMUM, nke enwere elu na IF147 n'ime oke ya mebiri ihe nke ATP synthase (nke bu ATP1A) ma obu neuroprotective.
Ịdọ aka ná ntị na uzuzu 147
Nkọwapụta ebe a na-egosi na ntụ ntụ J-147 nwere ikike iji zọpụta ezighị ezi nke uche mgbe a na-eme ya n'oge ngwụsị nke ọrịa ahụ. Ikike nke J-147 ntụ ntụ iji melite ebe nchekwa na ụmụ nnụnụ AD bụ ihe jikọrọ ya na ntinye ihe NGF (ụbụrụ na-akpata nerve) na BDNF (ụbụrụ na-emepụta ihe na-eme nyocha) nakwa ọtụtụ protein ndị BDNF bụ ndị dị mkpa maka ịmụ na ebe nchekwa. Nkọwa nke dị n'etiti J-147 (1146963-51-0) uzuzu na donepezil na ihe nlereanya scopolamine gosipụtara na ọ bụ ezie na ogige abụọ ahụ dị na nbudata ncheta oge mkpanaka, J-147 ntụ ntụ dị elu karịa icheta nchekwa gbasara ohere na nchikota nke abụọ ahụ nke kachasị mma maka ebe nchekwa.
Ọrịa Alzheimer bụ ụbụrụ ụbụrụ na-aga n'ihu, na-adịbeghị anya dị ka isi nke atọ na-akpata ọnwụ na United States ma na-emetụta ihe karịrị nde mmadụ America. Ọ bụkwa ihe kachasị akpata nkwarụ na ndị okenye, dịka National National Institute of Health. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgwụ ọjọọ emepụtara n'oge 20 gara aga na-eleba anya na ụbụrụ amyloid na ụbụrụ (nke bụ ihe ngosi nke ọrịa ahụ), mmadụ ole na ole egosiwo na ọ dị irè n'ụlọ ọgwụ ahụ.
"Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgwụ ọjọọ emepụtara n'oge 20 gara aga lekwasịrị ihe ndekọ akara amyloid n'ime ụbụrụ (nke bụ ihe ngosi nke ọrịa ahụ), ọ dịghị onye gosipụtara dị irè n'ụlọ ọgwụ ahụ," ka Schubert, bụ onye edemede bụ isi nke ọmụmụ ahụ kwuru.
Afọ ole na ole gara aga, Schubert na ndị ọrụ ibe ya malitere ịbịakwute ọrịa ahụ site na ọkwa ọhụrụ. Kama ịchọta amyloid, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri na ọ gaghi enwe ihe ọghọm dị mkpa maka ọrịa ahụ. N'iji mgbidi na-adabere na cell na-akpata ụbụrụ ụbụrụ na-eme agadi, ha na-emepụta ntụpọ J 147 (1146963-51-0).
Na mbụ, ìgwè ahụ chọpụtara na ntụ ntụ J-147 nwere ike igbochi na ọbụlagodi iwepụ ncheta na ọrịa Alzheimer na ụmụ oke nwere ụdị ụdị eketa Alzheimer's, bụ ụdị eji eji eji eji. Otú ọ dị, ụdị ọrịa a gụnyere ihe dịka 1 pasent nke ọrịa Alzheimer. Maka onye ọ bụla ọzọ, ịka nká bụ isi ihe kpatara nsogbu, ka Schubert na-ekwu. Ndị otu ahụ chọrọ ịchọpụta nsonaazụ nke onye na-a drugụ ọgwụ ọjọọ na ụdị ụmụ oke na-eto ngwa ngwa ma nwee ụdị nkwarụ nke yiri nke ahụ na-emetụta ọrịa ụmụ mmadụ.
J 147 Esi Ike
Raw J 147 ntụ ntụ Marketing
Otu esi zụta J 147 ntụ ntụ si AASraw